Milateriga Soomaaliya oo dib ula wareegay Awdheegle & khasaaraha oo aad u badan – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Milateriga dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta dib ula wareegay degmada Aw-dheegle iyo deegaanka Mubaarak oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose, halkaas saaka Alshabaab dagaal kula wareegeen.
La wargeegtaanka ciidamada Soomaaliya ee degmada Aw-dheegle iyo deegaanka Mubaarak ayaa timid kadib markii ay halkaasi isaga baxeen ciidamo ka tirsan Al-Shabaab oo saaka dagaal culus kula wareegay labada magaalo.
Gudoomiyaha degmada Aw-dhgeele, Maxamed Aweys Abuukar oo la hadlay VOA ayaa sheegay iney magaalada ka saareen Alshabaab, ayna haataan gacanta ku hayaan.
Gudoomiyaha ayaa sheegay in labada dagaal ee dhacay ay dowladda uga dhinteen 19 askari, halka Alshabaab laga dilay 26 kale, sida uu yiri.
“Annagu been ma sheegeynno, 19 askari ayaa dowladda uga dhintay labada dagaal ee dhacay, iyagana waxaa ka dhintay 26 oo meydkoodu yaallo Mubaarak” ayuu yiri Maxamed Aweys Abuukar.
Gudoomiyaha Aw-dheegle ayaa sheegay in milateriga Soomaaliya aysan xilligaan kaligood shaqeyn karin haddii aysan la socon ciidamada Midowga Afrika ee AMISOM.
Wuxuu sheegay in ciidanka Soomaaliya aysan heysan wax qalab ciidan oo tayo leh iyo rasaas ku filan, taasina sida uu yiri ay keentay iney ku tiirsanaadaan AMISOM.
Gudoomiyaha gobolka Shabeelaha Hoose, Cabdilqaadir Maxamed Nuur, ayaa isaguna sheegay in ay haatan ciidammada dowladda gacanta ku hayaan degmada Aw-dheegle iyo Mubaarak.